Wararka Maanta: Sabti, Oct 17, 2020-Garowe: Nin hooyadiis dilay oo lagu fuliyay xukun qisaas ah
Dilkiisa waxaa fuliyay Caawin Cabdi Maxamed oo ah marxxuumka walaalkiis, isagoo sheegay in qoyskooda oo ka kooban 7 qof isku raaceen in loo qisaaso gacan ku dhiiglaha.
Caawin wuxuu sheegay sababta uu walaalkiis u toogtay in ay tahay sidii ay bulshada cashar uga baran lahayd islamarkaana qof kasta oo dila hooyadiis la marsiiyo dariiq lamid ah midkan.
Marxuumka ayaa bishii June ee sanadkaan hooyadiis ku dilay tuulada Jalam oo Garowe kaga began dhinaca koonfureed. Laamanaha amniga ayaa gacan kusoo dhigay, waxaana kadib lagu xukumay dil.
Ma sheegin sababta uu u dilay hooyadiis, balse qoyskiisa waxay sheegeen inuu isticmaali jiray maandooriyaha.
Qisaasta caynkaan oo kale ah ayaa aad ugu yar gudaha Soomaaliya, waxaana jira dad waalidiintood dilay oo aan lagu fulin xukun qisaas ah.